चतुर ओलीका सामु कसैकाे केही सिप चलेन अन्ततः बादललाई जिताएरै छाडे - News 88 Post
चतुर ओलीका सामु कसैकाे केही सिप चलेन अन्ततः बादललाई जिताएरै छाडे
May 20, 2021 May 20, 2021 N88LeaveaComment on चतुर ओलीका सामु कसैकाे केही सिप चलेन अन्ततः बादललाई जिताएरै छाडे
काठमाडौँ । प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा २२ सांसद र लगभग ४० स्थानीय प्रतिनिधि गरी ६० आसपास मतदाता छन् । यसको अर्थ खनाल–नेपाल पक्षसँग करिब १७ सय मतभार छ । खनाल–नेपाल समूहले आफ्ना पक्षका मतदातालाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गर्न दिएपछि एमालेका बहुमत मतदाता रहँदारहँदै पनि गृहमन्त्री बादल जोखिमा परेका छन् । एमालेकै खनाल–नेपाल समूहको मत लिएर राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्तापक्षलाई धक्का दिने विपक्षी गठबन्धनको दाउ छ ।
ओलीले निर्वाचनका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत गृहमन्त्री थापासँगै हेटौँडा पठाएका छन् । तर, हेटौँडामा एमालेका दुवै समूह भिन्नाभिन्नै तरिकाले चुनावी रणनीतिमा जुटेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना उम्मेदवार थापासँग बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा पुगेका ओलीनिकट नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चुनावको परिणामले एमालेको भविष्य निर्धारण गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
‘बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिने चुनावको मानिसहरूले काउन्ट–डाउन गर्न थालेका छन् । तर, त्योभन्दा बढी देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको सुरक्षित जीवनको चासोचाहिँ सरोकारवालाले राखेको सत्यको कसीमा विश्लेषण गर्नु वस्तुनिष्ठ हुने पक्का हुन्छ है,’ बाँस्कोटाले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
मतदानको अघिल्लो रात एमालेको दुवै पक्षका नेताहरू उपनिर्वाचनको अन्तिम तयारी गर्न हेटौँडामा जम्मा भएर छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । यसले पनि बाँस्कोटाले भनेजस्तै एमालेको भविष्यलाई जोड्ने वा तोड्ने भन्ने निर्धारण गर्ने पुष्टि हुन्छ । एमालेको ओली पक्षका नेताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल बाँस्कोटा, डोरमणि पौडेल, विद्यासुन्दर शाक्यलगायत नेताहरूले होटेलमै बसेर आफ्नो पक्षमा मतदान बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
यस्तै, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेलगायत खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ र माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलहरूको टोलीसँग रिसोर्टमा बसेर छलफल चलाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छलफलमा एमाले नेतृ शाक्यले आफूहरूले गठबन्धनलाई नै साथ दिने बताएकी छिन् । स्रोतका अनुसार खनाल–नेपाल पक्षले गठबन्धनका स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. देवकोटालाई नै मतदान गर्न आफूपक्षीय प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ह्विप नै जारी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि एकीकृत पार्टी नेकपा हुँदै मतभेदमा उत्रिएका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताहरू खनाल–नेपाल समूहबीच अहिले पार्टी एकता कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा कार्यदल बनाएर छलफल चलिरहेको छ । तर, तीन दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले समय घर्किनै लाग्दासमेत कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
बिहीबार समय सकिनै लाग्दा कार्यदलको बैठक एकपटक मात्रै बसेको छ भने बुधबार तोकिएको बैठक बस्नै नसकेर बिहीबारका लागि सारिएको छ । बिहीबारै हुने उपनिर्वाचनमा खनाल–नेपाल पक्षले लिने निर्णयका आधारमा थप छलफल अगाडि बढाउनका लागि ओली पक्षले बैठक सारेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । यस उपनिर्वाचनको परिणामले एमालेको एकता जोगाउने वा तोड्ने निधो गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एक सय १० र प्रदेशअन्तर्गतका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुई सय ३८ गरी तीन सय ४८ मतदाता रहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख निर्वाचनका लागि मतदाता हुन् । मतदातामध्ये एक प्रदेश सांसदको ४८ र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधिको १८ मतभार हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सभामा एक सय १० सांसदको ५२ सय ८० र एक सय १९ स्थानीय तहका दुई सय ३८ प्रतिनिधिको ४२ सय ८४ गरी जम्मा ९५ सय ६४ मतभार छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेका प्रदेश सभामा ५७ मध्ये एकजना सांसद पशुपति चौलागाईंको निधन भएसँगै ५६ जना र स्थानीय तहमा एक सय ३३ जना गरी एक सय ८९ मतदाता छन् । यसको कुल मतभार पाँच हजार ८२ हुन्छ ।
प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा २२ सांसद र लगभग ४० स्थानीय प्रतिनिधि गरी ६० आसपास मतदाता छन् । यसको अर्थ खनाल–नेपाल पक्षसँग करिब १७ सय मतभार छ । कांग्रेसका प्रदेश सभामा २२ र स्थानीय तहमा ६८ जना गरी ९० जना मतदाता छन् । जसको कुल मतभार २२ सय ८० हुन्छ । त्यस्तै, माओवादीको प्रदेश सभामा २३ र स्थानीय तहमा ३३ जना गरी ५६ जना मतदाता छन् । जसको कुल मतभार १६ सय ९८ हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीको जोड्दा ३९ सय ७८ मतभार हुन आउँछ ।
खनाल–नेपाल पक्षका सात–आठ सय मतभार डा. देवकोटातिर गयो भने गृहमन्त्री बादलका लागि चुनौती बन्न सक्छ । यही अंकगणितले सत्तापक्ष एमालेलाई तनाव दिएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले एमालेकै अन्तर्विरोधबाट जितको अपेक्षा गरेको छ ।
पहिला नम्बर सुनको भाउ बढ्याे
यी हुन् राष्ट्रघाती नेता, हेर्नुस् कुन नेताले कहिले, कसरी राष्ट्रघात गरे !
कहिले जान्छ नेपाली जहाज अफगानिस्तान ?
August 15, 2021 N88
September 24, 2021 N88